Natomboka tamin’ny fikasana hanome toerana hankafizan’ny mponina ao an-toerana sy hanaovana famelabelarana ho an’ireo mianatra piano eny amin’ny oniversiten’ny mozika ny “Aprico Lunch Piano Concert”.Hatreto dia tanora mpitendry piano miisa 70 no efa nipoitra, ary maro amin’izy ireo no mavitrika amin’ny asan’ny mpitendry piano amin’izao fotoana izao, ary nipoitra ho “pianista mitefoka amin’ny ho avy” avy amin’i Aprico.
Hatramin'ny taona voalohany nisian'ny Reiwa dia nanao fanadinam-panatanjahantena izahay mba hanomezana fahafahana hanao fampisehoana tanora kokoa ho an'ny mpitendry piano.Azafady, araraoty ity fahafahana ity mba hahazoana traikefa azo ampiharina amin'ny maha-pianista amin'ny fijoroana eo amin'ny lampihazo Ota Civic Hall Aprico Large Hall.Manantena izahay fa maro ny olona handray ny fanamby.
Kyoko Michishita (mpitsikera mozika)
* Noho ny toe-javatra samihafa, Kyoko Michishita dia hovana ho Midori Nohara.
(Fondation Public Incorporated) Fikambanan'ny Fampiroboroboana ara-kolontsaina Ota Ward Fizarana "Piano Lunch 2023 Audition Mpanatontosa"
Marihina fa ny saran-dalana sy ny trano fandraisam-bahiny amin'ny fanadinana, fivoriana, famerenana, fampisehoana, sns, dia ho an'ny tsirairay.
Manomboka amin'ny 2023, ny fampisehoana piano aprico lunch dia fampisehoana karama miaraka amin'ny seza rehetra natokana ho an'ny 500 yen (nomanina).
Fantenana voalohany Documents / composition / DVD screening
Horonantsary nolalaovin'ilay mpangataka mihitsy
Manodidina ny 15 minitra eo ny fotoana fandraketana an-tsary
Solo irery (concerto, mozika chamber, sns.) tsy azo atao)
Ny DVD dia voafetra ho an'ireo izay azo alefa amin'ny mpilalao DVD ankapobeny
Raha te handrakitra hira maromaro ianao dia ataovy izay hampidirana hira iray.
Ampidiro azafady ny anarana sy hira voarakitra ao amin'ny DVD
① Motivation amin'ny fangatahana rindran-kira piano aprico lunch
② Inona no karazana fanamby tianao horaisina amin'ny maha-mpitendry piano anao amin'ny ho avy?
Asabotsy 2022 Desambra 12 amin'ny 17:11 - (voalamina)
Hanomana fandaharana irery mandritra ny 50 minitra eo ho eo, ary ireo mpitsara no hamaritra ireo hira holalaovina sy hohiraina amin’io andro io.
Mety ho tapaka eo afovoan'ny fampisehoana.Mariho fa.
Nalefa tamin'ny zoma 2022 Desambra 12 (nokasaina)
Ireo mpangataka mahomby dia voalahatra hanao fihaonana mivantana sy fihaonana amin'ny andro hisehoana amin'ny 2023:1 ny 11 Desambra 16 (Alarobia).Misaotra anao tamin'ny fanitsiana nataonao.
Vol.71 Alarobia 2023 Jolay 7
Vol.72 Zoma 2023 Mey 11
Vol.73 Talata 2024 Martsa 3
Ny seza rehetra dia voatokana 500 yen (voaomana)
Manomboka amin'ny taona 2023, hisy sarany ho an'ny rindran-kira piano sakafo atoandro.Hanome tapakila fanasana roa ho an’ireo mpanakanto izahay, fa mangataka fiaraha-miasa amin’ny varotra ihany koa.